ကျွန်တော်တို့အကြောင်း - Catering Services, Lunch Box by May Kyi Food Production
အော်ဒါတင်ရန် +၉၅ ၉ ၇၇၀ ၀၀၇ ၇၈၈
မေကြည်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ကို ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့ရိုးရာ ထမင်းဟင်းမျိုးစုံထုတ်လုပ်ပြီး ပွဲလမ်းသဘင်များအတွက် အစားအသောက်အော်ဒါများ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ မေကြည်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့အနှံ့တွင် ဆိုင်ခွဲများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးပါသည်။
စားသုံးသူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကြိုက်နှစ်သက်မှုအခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ရောင်းချပေးနိုင်ရန် အစဉ်ကြိုးစားခြင်းနှင့်အတူ စားသုံးသူမိတ်ဆွေများ၏ လိုအပ်ချက်အရ ဆိုင်ခွဲသစ်များကို တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။
စက်ရုံပြင်ဆင်မှုအပိုင်းတွင် အစားအသောက်ချက်ပြုတ်ရေး၏ အဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရေသန့်စင်ရေးအတွက် အဆင့်မြင့်ရေသန့်စင်စက်ဖြင့် အဆင့်ဆင့်စစ်ယူပြီး ဓါတ်ရောင်ခြည်သုံး ပိုးမွှားသန့်စင်စက်များတင်ဆင်ထားပါသည်။ ကျန်းမားရေးအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ စားသုံးနိုင်စေရန် အစားအသောက်သိုလှောင်ခန်းများကို အမြဲခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းအောင် ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
မေကြည်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှထုတ်လုပ်သော ထုတ်ကုန်များအားလုံးကို (ISO 9001) စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အညီထုတ်လုပ်ပြီး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှပေးအပ်သော ကျန်းမာရေး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လည်း ရရှိထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စားသုံးသူများကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားခြင်း၊ အရသာပြည့်စုံသော အစားအသောက်များကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စစ်မှန်သော အရသာကို ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းစသည့် အစားအသောက်ကောင်း အင်္ဂါရပ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်နှင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စေရန် မေကြည် မိသားစုအနေဖြင့် အစဉ်တစိုက် ကြိုးစားထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။
အမှတ် (၃ဃ+၄ဃ)၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ရွှေပိတောက် ငါးဈေးဝန်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
+၉၅ ၉ ၇၇၀ ၀၀၇ ၇၈၈ +၉၅ ၉ ၆၇၀ ၀၁၇ ၇၈၈
Copyright © 2020. May Kyi Food All rights reserved. Created by